Nintendo Chinja: 4K pakupedzisira inogoneka! - Game poindi - bhodhi mitambo nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Apr 16, 2022 | Vapepeti Sarudzo, nhau, Vhidhiyo mitambo
Kutamba mu4K resolution paNintendo Shandura zvinogoneka. Kwete Nintendo pachayo inopa iyo yepamusoro resolution pane iyo hybrid console, asi yekunze gadget kubva kuSouth Korea. Iyo diki dzvuku block inoyera resolution kusvika ku4K, kuitira kuti maNintendo mafani anogonawo kuwana "inotevera-gen" kunzwa kumba.
Iyo Nintendo Shandura pasina mubvunzo yakabudirira uye yekuvandudza koni, asi haisi iyo yakanyanya simba pamusika. Varidzi veXbox Series X kana Playstation 5 vagara vachikwanisa kutamba mitambo yavo yavanoda vari kumba neyakachinjika mufananidzo resolution inosvika zviuru zvina zvepixels. A 4.000K resolution paNintendo Shandura yanga isiri nyaya kusvika parizvino. Saka mafeni anga achitarisira "Nintendo Shandura Pro" kwenguva yakareba, nekuti kunyangwe iyo OLED modhi yeNintendo Shandura, iyo yakagadziridzwa zvakadzama, haigone kuita kusvetuka mukugadzirisa skrini.
Nintendo Chinja mu4K neAsia Gadget
Iyo yakasanganiswa pfungwa yeNintendo Shandura ine mutengo wayo: Kunyangwe muTV modhi, iyo inobatsira console inongobata Full HD. Zvakangodaro, iyo Nintendo koni, iyo yave iripo kubva 2017, yakabudirira zvakanyanya: mugadziri wekuJapan console akakwanisa kutengesa makumi emamiriyoni pasi rese, aine tarisiro yakajeka pamhuri-inoshamwaridzana, asi pamusoro pese mafaro asina kuoma. Kwenguva yakareba, vateveri vaifara kuita pasina 4K paNintendo Shandura, asi nekuburitswa kweMicrosoft uye Sony's nyowani magetsi ekunyaradza, mamiriro acho akachinja zvishoma: vateveri vava kudawo maitiro-enjiniya modhi kubva kuNintendo. Kunyangwe Nintendo yakapa iyo OLED vhezheni, izvi hazvina kukwana kune vanofarira mifananidzo.
Iyo 4K resolution paNintendo Shandura yakaramba isiri-yekuenda kune vateveri - zvirinani kusvika zvino. Iine "4K Gamer Pro", gadget yave kuwanikwa muSouth Korea online shopu iyo inofanirwa kugonesa mutambo mu4K paNintendo Chinja. Sarudzo inokwidziridzwa muTV modhi (upscaling). Iko kushandiswa kweiyo US tsvimbo-senge yekuwedzera iri nyore: Inongochinja pakati peNintendo Chinja neterevhizheni.
Ehe, pane imwe yakaderera: haisi yekuzvarwa 4K resolution, asi yakawedzera imwe. Nekudaro, izvi zvichiri kuita kuti chifananidzo chiwedzere. Uye: iyo 4K sarudzo inongowanikwa yeiyo docked TV modhi - mu handheld mode hapasati pasisina 4K paNintendo Chinja.
Iyo "120K Gamer +" inodhura anenge zana nemakumi maviri emaeuro mu South Korea online chitoro "Funshop". Vafudzi munyika ino vanogona kungowana gadget pasi pemamiriro ezvinhu akaoma, nokuti kunyange dai kuendesa kuGermany kwaikwanisika, mutengo waizowedzerwa nemamwe mabasa etsika.
Imwe nzira: angangoita akakwenenzverwa mavara anogona kugadzirwa paNintendo Chinja ne "Plug uye Tamba Vhidhiyo Game Upscaler" kubva mClassic. Nekudaro, mutengo weizvi unokwira 130 euros.
Mushure mezvose, mugadziri we "PhotoFast 4k Gamer +" inotaura kuti inoda kumisa mushandirapamwe wekuwedzera mari kune gadget. Inofanira kubva yamhanya kuburikidza neKickstarter - uye mafeni anogona kuwana mukana wekubata mudziyo nemutengo wakaderera, chero iyo "swarm" pakupedzisira inogonesa kugadzirwa kwehuwandu.
Kana iwe uchida kutamba mu4K paNintendo Shandura pasina kutendeukira kune akadaro ehunyanzvi gimmicks, tarisa muchubhu. Kana "Nintendo Switch Pro" ine simba zvakanyanya ichaonekwa hazvizivikanwe. Dzimwe nyanzvi dzinofungidzira, vamwe vanoramba. Native 4K resolution ichiri kuwanikwa munzvimbo yekunyaradza paPlaystation 5 uye Xbox Series X. Iyo Nintendo Shandura inogadzira 1.080p muTV mode kana 720p mu handheld mode. Asi: Ruzhinji rwevateveri veNintendo Switch havana hanya nezvemhando yemifananidzo zvakadaro, ndeye - mukuwedzera kune iyo hybrid modhi uye itsva Joy-Cons - asi iyo Nintendo-yakasarudzika vhidhiyo mitambo inoshanda sesimba rekutyaira.
Nintendo Switch (OLED Model) - Ichena * 394,95 EUR tenga
Kare Roguelike kukwira Insurmountable inowana update
Inotevera Youtuber Ben Phillips anonzi akatsoropodza vateveri veSafemoon
Mutongi mutsva wendege weXbox nePC: "Pasi rose kumhanya" paVelocityOne
Xbox Showcase: World premieres, akasarudzika mazita - asi hapana zuva rekuburitswa
Pandemic Legacy: Mwaka 0 inotora vatambi muCold War
FIFA 21: New Trailer - Zvigadziriso zvebasa modhi, yakawanda realism uye online modes